प्रेरक भनाई Archives - Sagarmatha Online News Portal
सफल बन्न यी जीवनोपयोगी सीप अपनाउनुस
काठमाडौं । सफल जीवनका लागि चाहिने उपयुक्त सीप नै जीवनोपयोगी सीप हो । अर्थात, मानिसको जीवनमा आउने दैनिक व्यवहारको गतिविधि अन्तर्गत पर्ने हरेक काम र कार्य पुरा गर्ने दक्षता अनुसारको सीप जीवनोपयोगी सीप हो । मानिसको जीवनोपयोगी सीपले जीवन...
१० जीवन उपयोगी टिप्स, जसले तपाईको जीवनलाई सार्थक बनाउँछ
१. तिमी अहिले जहाँ छौ, त्यही नै तिम्रो लागि ठूलो अवसर हो । काममा लगनशील भएर लाग्नुहोस । २. सफलताको सुरुवात बिन्दु भनेको सपना देख्नु हो । जब तपाई सपना देख्नु हुन्न सफलता शिखर आकाश जस्तै क्षितिजमा पुग्छ । ३. काम गर्नको लागि अनुकुल समय प...
२० प्रेरक भनाई, जसले तपाइको जिन्दगी बदलदिनेछ
१. जब कसैले तपाईको कपि गर्छ भने, सम्झिनुस् की तपाई सफल हुदै हुनुहुन्छ । २. यदि तपाईको Plane A ले काम गरेको छैन भने, नआत्तिनुस् अझै २६ वटा Latter बाँकी नै छ । ३. जुन व्यक्तीले कहिलै गल्ती गरेको छैन, त्यस व्यक्तीले कहिलै नँया गर्नै कोसि...
रोम । इटलीको एक शहर ब्रिन्दिसीमा दोस्रो विश्वयुद्धको शक्तिशाली बम निस्क्रिय बनाउन ५० हजारभन्दा धेरै मानिसलाई विस्थापित गरिएको छ । शहरको दक्षिणी क्षेत्रबाट ५४ हजार मानिसलाई हटाएर उक्त ठाउँ खाली गरिएको हो । स्थानीय मिडियाका अनुसार उक्त ब...
काठमाडौं । पासपोर्ट विना विदेश जान पाइँदैन भन्ने कुरा त सबैलाई थाहै छ । आफ्नो मुलुकको पासपोर्ट र नियमानुसारको भिसा विनै विदेशी मान्छे समातियो भने जुनसुकै देशले कारवाही गर्दछन् । तर यो दुनियामा एउटा यस्तो देश छ, जहाँकी महारानीसँगै आफ्नो देशक...
काठमाडौं । चैतको अन्तिमतिर डडेल्धुराबाट धनगढी हुँदै अमरगढी २ आइतेबजारकी निर्मला थापामगर परिवारलाई खबर नगरी काठमाडौं आउँछिन् । काठमाडौं आएर होटलमा काम शुरु गर्छिन् । सम्पर्कविहीन भएपछि निर्मलालाई परिवारले खोज्न शुरु गर्छ । कतै नभेटिएप...